15th International gvSIG Conference - ụbọchị 1 - Geofumadas
Nọvemba, 2019 Geospatial - GIS, GvSIG, innovations
15th International gvSIG Conference malitere na November 6, na Higher Technical School of Geodetic, Cartographic na Topographic Engineering - ETSIGCT. Ndị ikike nke Polytechnic University of Valencia, ndị Generalitat Valenciana na General Director nke gvSIG Association Alvaro Anguix rụrụ oghere nke ihe omume ahụ. Daysbọchị ndị a ka dabara gvSIG Desktop 2.5, nke dị njikere maka nbudata.
Dịka Geofumadas anyị ekpebiela ịbịa ihe omume a n'onwe anyị, n'ime ụbọchị atọ a, ịma ihe nnwere onwe ngwanrọ a na-anọchi anya ya, nke bụ ihe amụrụ ugbu a na mpaghara Hispanic na oke kachasị nke njikọta ụwa.
N'ụbọchị mbụ nke ụbọchị nnọkọ izizi mbụ, nọ na-elekọta ndị nnọchi anya Institut Cartografic Valencià - Generalitat Valenciana, CNIG - National Center of Geographic Information of Spain na ndị mmadụ nke Gọọmentị Uruguay, onye gosipụtara IDE nke Uruguay emejuputara na gvSIG Online.
Nke a mechara, nnọkọ nke abụọ gara n'ihu, ebe a ga-atụle IDE. N'ụbọchị a, ndị nnọchi anya Mahadum Naịjirịa nke Mahadum Malaga nọ na-ekwu akwụkwọ ha, ndị kwurịtara ihe PANACEA MED di iche iche. Mgbe ahụ, Raúl Rodríguez de Tresca - IDB weere ala ahụ, na-ekwupụta mbipụta ahụ Geoportal maka ijikwa okporo ụzọ na Dominican Republic, iji mepụta teknụzụ ndị na-akwado nkwado na njikwa nke ngwongwo nke netwọk okporo ụzọ na àkwà mmiri. Na mgbakwunye, Rodriguez kwuru na mkpa ọrụ ya bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-enyocha oghere gbasara ohere,
"Ihe anyị rụpụtara bụ mmeghe nke uche, enwere ndị mmadụ ugbu a jikọtara aka na ọrụ nke rịọ maka ntinye ha iji banye na usoro ma mepụta-jikwaa data ahụ."
N'ime otu ụdị akụkọ a, Ramón Sánchez de Sans2 Innovación Sostenible SL, gosipụtara gvSIG Applience lekwasịrị anya na njikwa akụrụngwa, nke ahụ bụ otu esi ejikọta sistemụ nyocha ma jikọta ya na GvSIG GIS n'efu, iji kwalite njikwa akụrụngwa na nzaghachi dị irè n'oge ihe omume.
Ihe mgbochi nke atọ nke ụbọchị metụtara njikọta, nke Joaquín del Cerro, onye nnọchite nke gvSIG Association gosipụtara ndozi na mmelite sistemụ maka Njikwa ihe ọghọm na njikọta na ARENA2 nke General Directorate of Traffic na gvSIG Desktop. N'aka nke ọzọ, Oscar Vegas gosipụtara Usoro ntuziaka nke usoro sava mmiri na - enweta site na gvSIG site na enyemaka nke ngwaọrụ NtụgharịGISEpanet na RunEpanetGIS, nke bụ ngwaọrụ iji mepụta ụdị hydraulic nke netwọkụ mmiri na-enye mmiri, emere ka a hụ ụzọ esi ebufe ozi a na GIS, yana mfe ntụgharị faịlụ na ngosipụta data.
Anyị na-aga n'ihu na ngosipụta ikpeazụ nke ngọngọ 4to na ngosipụta nke Iván Lozano de Vinfo VAL, onye gosipụtara dị ka VinfoPol, meziwanye usoro niile nke metụtara ndị uwe ojii, site na ọnọdụ, njirimara profaịlụ mpụ, ịdị adị nke ndị ọzọ. A haziri ngwa a ka ọ bụrụ enyo, ebe ị nwere ike ijikwa ihe niile mere na ndị uwe ojii na - eme ihe, "anyị na - emepụta njikwa zuru oke iji jikwaa usoro niile ndị uwe ojii na - arụ ọrụ na otu mmemme."
N'ikpeazụ, anyị na-eji isi okwu nke Ngwaọrụ ekwentị abịa na njedebe nke nnọkọ. N'akụkụ a, a gosipụtara ihe ịga nke ọma nke ejiri ngwaọrụ mkpanaka rụọ, dịka ọmụmaatụ, Ms. Sandra Hernández nke Mahadum Automoous nke Steti Mexico gosipụtara ozi na Nhazi na nchịkọta data n'ọhịa site na ngwa na akụrụngwa, maka ntule nke ijegharị na Ogbe Ndị Mere Ihe Akụkọ nke Toluca. Site na oru ngo a, ndị bịaranụ nwere ike iji anya nke uche ahụ wee rụọ ọrụ ubi wee jiri ngwa mkpanaka gvSIG, nke bụ n'efu ma na-arụ ọrụ na ntanetị na-enweghị na-ejikọ na Wi-Fi ma ọ bụ netwọ data, a ga-ahazi ozi a nyochara ma mesịa gvSIG na Desktọpụ, iji wepụta akụkọ banyere agagharị nke ụmụ amaala Toluca nwere na akụrụngwa ha nwere maka njem ụgbọelu ha n'efu.
Glọ ọrụ gvSIG na-akwalite nsonye na nnọkọ ahụ ọ bụghị naanị nke òtù ma ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ, kamakwa, gosipụtara ọrụ nke otu n'ime ụmụ akwụkwọ ya, Glene Clavicillas na ọrụ ya. Na-eme ihe osise ugbo site na nyocha nke oge nke ihe oyiyi satellite na ihe osise nke cadastral.
Nke ehihie gara n'ihu soro ndị nkuzi, ebe ọtụtụ debanyere aha n'efu. Ihe omumu ihe a tinyere isi okwu dika gvSIG maka ndi nmalite, nyocha data na gvSIG ma obu TransGISEpanet - RunEpanetGIS - gvSIG maka ọgwụgwọ nke ihe omuma.
Ọ bụrụ na ị gafere otu na Valencia, a ka nwere ụbọchị abụọ fọdụrụ; nke anyị nwere olile anya ikpuchi ajụjụ ọnụ ndị gbara ọkpụrụkpụ egwu ga-eme ka anyị hụ ọhụụ ebe ha chere gvSIG ga-aga n’afọ ndị na-esote.
Previous Post«Previous Geo-Engineering & TwinGeo Magazine - Nke Abụọ